ऋण पत्रका अवरोध | गृहपृष्ठ
Home सम्पादकीय ऋण पत्रका अवरोध
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपालका ऋणपत्रको बजार ठूलो रहेकाले यसतर्पm लाग्न सुझाव दिए पनि दोस्रो बजारमा ऋणपत्र विक्री गर्न भने सहज छैन । त्यसैले ऋणपत्रको बजार विस्तारमा बाधा पुगेको छ । ब्याजदरमा तीव्र उतारचढावको चक्रमा नेपाल बारम्बार परिरहेकाले समाधानका लागि विभिन्न उपकरणमध्ये दीर्घकालीन ऋणपत्र एक हो भनेर अर्थशास्त्रीहरूले पनि सुझाव दिँदै आएका छन् । विक्रीमा समस्या आएकाले नै मानिसहरू ऋणपत्रमा लगानी गर्न हिचकिचाइरहेका छन् । साँची नै ऋणपत्रको बजार विस्तार गर्ने हो भने यसको सहज विक्रीका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हुन्छ ।
ऋणपत्रको विस्तारले ‘यिल्ड कर्भ’ बनाउँछ । यो कर्भका आधारमा ब्याजदरको दीर्घकालीन भविष्यवाणी गर्न सकिन्छ । त्यस्तै ऋणपत्रले समग्र बजारमा ब्याजदरलाई स्थिर पनि बनाउँछ ।
तरलताको अभाव र ब्याजदरमा तीव्र उतारचढावले नेपालको अर्थतन्त्र नै जोखिममा परेको छ । यसमा सन्तुलन ल्याउन दीर्घकालीन प्रकृतिको ऋणपत्र आवश्यक हुन्छ । त्यही भएर अहिले बैंकहरूले धमाधम ऋणपत्र जारी गरिरहेका छन् । तर, यस्ता ऋणपत्र बेच्न बैंकहरूलाई गाह्रो भएको छ । यसो हुनुमा एउटा कारण जनचेतनाको कमी नै हो । बैंकले दिने ब्याजदर केही समयका लागि धेरै भए पनि तरलता सहज हुनेबित्तिकै त्यो घट्छ । तर, ऋणपत्रले दिने ब्याजदर भने स्थायी हुन्छ । शेयरबजारमा अलिकति घाटा हुनेबित्तिकै आत्तिएर शेयर बेच्नेहरूका लागि ऋणपत्र उपयुक्त लगानीको उपकरण हुन सक्छ किनभने यसमा घाटा हुँदैन ।
ऋणपत्रको बजार विस्तार गर्न अर्थमन्त्रीले सुझाव दिए पनि यसको विस्तारका लागि भने कामै भएको छैन भन्न सकिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका डिपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले पूँजी बजारको विकासका लागि विभिन्न सुझाव दिँदै ऋणपत्रको बजारबारे पनि सुझाव दिएको थियो । तर, अहिलेसम्म ऋणपत्रको बजार सृजना भएको छैन । दोस्रो बजारमा सूचीकरण भए पनि ऋणपत्रको खुला किनबेच हुन सकेको छैन । हो, नेपाल राष्ट्र बैंकले बेचेको ऋणपत्रको भने केही किनबेच भएको पाइन्छ किनभने यसका लागि बजार निर्माताको व्यवस्था गरिएको छ । बजारमा ऋणपत्रका खरीदकर्ता नै नभएकाले यसो भएको हो । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले डिपोजिट सर्टिफिकेट निकाल्न पनि बैंकहरूलाई सुझाव दिएका छन् । बैंकमा रकम राखेपछि बैंकले दिने यस्तो सर्टिफिकेट दोस्रो बजारमा बेच्न पनि सकिन्छ, कुनै बैंकमा धितो राखेर कर्जा लिन पनि सकिन्छ । यसलाई पनि दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न समस्या छ ।
ऋणपत्र होस् वा डिपोजिट सर्टिफिकेट ठूलो परिमाणमा एउटै व्यक्तिले खरीद गरेका हुन सक्छन् । त्यस्तोमा सामान्यतया सबै रकमको एउटै प्रमाणपत्र हुन सक्छ । शुरू निष्कासनमा थोरैथोरै रकमका धेरैओटा ऋणपत्र हुने गरी किन्न त पाइन्छ । तर, धेरैले त्यसो गर्दैनन् । पूरै रकमको ऋणपत्र वा सर्टिफिकेट विक्री गर्न गाह्रो हुन्छ । त्यसलाई खण्डीकरण गरे बेच्ने व्यवस्था त छ तर यसको जानकारी थोरैलाई मात्र छ । राष्ट्र बैंकको ऋणपत्रलाई पनि खण्डीकरण गराउन त सकिन्छ तर निकै झन्झटिलो छ किनभने त्यसका लागि राष्ट्र बैंक नै पुग्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा पनि राष्ट्र बैंकले खण्डीकरण गर्ने काम सधैं गरिरहने गरेको पाइँदैन । यस कारण पनि ऋणपत्र किन्न मानिसहरू त्यति अकर्षित नभएका हुन सक्छन् । अर्को ऋणपत्रका फाइदाबारे जनतालाई राम्ररी थाहा छैन । ऋणपत्रको ब्याजदर र मुद्दती खाताको ब्याजदरमा खासै अन्तर नभएकाले पनि ऋणपत्र खरीद गर्न मानिसहरू उत्साहित नभएका हुन सक्छन् । शेयरबजार र ऋणपत्रमा मिलाएर लगानी गर्न जाने फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने पनि कमैलाई मात्र थाहा छ ।
ऋणपत्रको विस्तारले ‘यिल्ड कर्भ’ बनाउँछ । यो कर्भका आधारमा ब्याजदरको दीर्घकालीन भविष्यवाणी गर्न सकिन्छ । त्यस्तै ऋणपत्रले समग्र बजारमा ब्याजदरलाई स्थिर पनि बनाउ“छ । त्यसो भएकाले अर्थमन्त्रीले भनेझैं ऋणपत्रको बजार विस्तार गर्नैपर्छ । तर, यसका लागि जनचेतना बढाउने र दोस्रो बजारमा सहज किनबेच हुन सक्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।